Izincwadi ezihamba phambili zango-2017 ongeke ukwazi ukuyeka ukuzifunda | Izincwadi Zamanje
Ukuphela konyaka kuyasondela, ngakho-ke sekuyisikhathi sokubalula zonke izikhathi esike sabhekana nazo, ukumamatheka esikunikezayo, futhi-ke, lezo zincwadi ezintsha ezifikile ukukhulisa izitolo zethu zezincwadi. Unyaka ohleliwe nalaba izincwadi ezinhle kakhulu zango-2017 leyo ingaba yindlela enhle yokuqala i-2018 elandelayo phakathi kwezindaba ezinhle kakhulu.
1 Iziguli zikadokotela García: Iziqephu zempi engapheli, ngu-Almudena Grandes
2 4 3 2 1, kaPaul Auster
3 Inkosi yamathunzi, kaJavier Cercas
4 Ukuzinikela, nguRay Loriga
5 Insika Yomlilo kaKen Follett
6 Umlilo ongabonakali, kaJavier Serra
7 Okungenakulinganiswa, ngu @srtabebi
8 Inzondo Oyinikezayo, ngu-Angie Thomas
9 UMnyango Wenjabulo Ephakeme, ka-Arundhati Roy
10 UBerta Isla, kaJavier Marías
Iziguli zikadokotela García: Iziqephu zempi engapheli, ngu-Almudena Grandes
Ngaphandle kokugxila kwemisebenzi yomuntu ngamunye eminyakeni yakhe yokugcina, u-Almudena Grandes ugxile ekumqhubekiseni phambili uchungechunge lwezincwadi ngenkathi yangemva kwempi efakwe ngu-Inés nenjabulo, umfundi kaJules Verne, imishado emithathu kaManolita futhi, yakamuva, iziguli zikaDokotela García, eshicilelwe ngo-2017. Inoveli yezobunhloli exhumanisa uzungu abahlukahlukene beMpi Yezwe II kanye neSpain yangemva kwempi eseMadrid, ikakhulukazi ukuba khona kwenhlangano eyimfihlo yababaleki abavela eMbusweni Wesithathu lapho abangane ababili bakudala abavela eMpini Yombango bazozama khona ukungena.
4 3 2 1, kaPaul Auster
Ngemuva kweminyaka eyisikhombisa kuthulekile, u-Auster ubuyile kulo nyaka enencwadi entsha ngaphansi kwengalo yakhe. Ukuvakasha kwe- isizinda sobuhlanga se-United States engxenyeni yesibili yekhulu lama-XNUMX ngamehlo kaFerguson, insizwa ebhekene nemizwa nemizwa yezimpilo ezine ezihlukene. Uhambo olusicwilisa ngezindlela ezahlukahlukene zothando, isizungu noma umphakathi obonwa kumlingiswa ofanayo. Umlutha futhi unamandla, i-4 3 2 1 iqinisekisa amandla ka-Auster okukuyisa phansi futhi akwenze uzulazule usuka endabeni eyodwa uye kwenye ngaphandle kwesaziso. Enye yezincwadi ezinhle kakhulu zango-2017.
Inkosi yamathunzi, kaJavier Cercas
Inoveli yokugcina kaJavier Cercas iyisihawu somlobi ngezizathu eziningi, ikakhulukazi ngoba ikhuluma ngomalume womlobi, uManuel Mena, owayethathwa njenge-Falangist futhi ngubani ushone eneminyaka engu-17 ngesikhathi sempi yombango yaseSpain. Indaba exhumanisa uCerca nesikhathi esedlule abenamahloni ngaso ngaphambi kokuqala futhi akuyona i-akhawunti enonya le mpi kuphela, kodwa futhi neso lenkunzi nokwesaba kwangaphakathi kombhali uqobo.
Ukuzinikela, nguRay Loriga
Elinye lamagama amakhulu walokho okuthiwa ubuqiniso obungcolile baseSpain, URay Loriga, ubuye kulo nyaka nencwadi entsha, iSurrender, naye owine umklomelo we-Alfaguara Novel Prize 2017. Umsebenzi lapho uLoriga asifaka khona emihlabeni emibili, omunye ungokoqobo kanti omunye oqanjiwe ovuswe yiTransparent City, isixhumanisi sayo esivamile umbono wempi evela phesheya. Ukuxabana kuhlanjululwe ukukhohlisa nobuhlungu obutholwa ubaba ohamba nomkakhe nendodana yakhe, uJulio omncane.
Insika Yomlilo kaKen Follett
Ngokuningi Izincwadi eziyizigidi ezingama-150 zithengisiwe, UKen Follett ungomunye wamagama amakhulu athengisa kakhulu esikhathini sethu, ngokuba yiNsika yoMlilo incwadi yokugcina eyanyatheliswa ngumlobi waseBrithani. Ingxenye yesithathu yesaga esaziwayo se-The Pillars of the Earth ilandisa ukubuyela ekhaya kwentsha uNed Willard, ngesikhathi iKingsbridge Cathedral edumile ifakaza imbangela eguqule lonke elaseYurophu laphikisana neNgilandi: ukubekwa kuka-Elizabeth I, owenqaba ukushiya isihlalo sobukhosi senzeka ngokungapheli kwamasu okuvikela noma yikuphi ukuhlaselwa noma ukuvukela umbuso kuye.
Umlilo ongabonakali, kaJavier Serra
Ubhekwa njengomunye wababalisi bezindaba abahamba phambili ezweni lethu, uSerra uwine i- Umklomelo Weplanethi 2017 sibonga umsebenzi wakhe wakamuva, okhishwe ngoNovemba odlule. Ngemuva kwalezi zincwadi ezihlale zizama ukunikeza izimpendulo zezinganekwane isintu esingakazitholi izinqumo, i-Invisible Fire yethula uDavid Salas, isazi sezilimi esivela eTrinity College Dublin osezophenya ngobudlelwano phakathi kweGrail Engcwele ISpain ngemuva kokunyamalala komunye wabafundi bomngani wakhe wakudala, uLady Goodman. Enye yezincwadi kulo Khisimusi, ngaphandle kokungabaza.
Okungenakulinganiswa, ngu @srtabebi
Imibhalo ibe nezinguquko ezinkulu eminyakeni yamuva nje ngenxa yamandla we amanethiwekhi omphakathi. the microliterature, noma ikhono lombhali lokufinyelela kubafundi besikhathi esizayo ngezindlela ezintsha nezintsha zokukhuluma selivele laba iqiniso, futhi esinye sezibonelo ezinhle kakhulu impumelelo ye-Indomable, incwadi ka @srtabebi ekhulelwe yile blonde nobufazi eyavela ku-Instagram njengo "ibhomu."
Inzondo Oyinikezayo, ngu-Angie Thomas
Ngemuva kwalokhu Ukuphila Okumnyama Matter Ishukunyiswa ukuqokwa kukaDonald Trump kwesobumongameli baseMelika, iThe Hate You Give iza ngesikhathi esifanele ukuzindla ngesimo sobandlululo e-United States. Ibalulekile futhi inzima, incwadi ka-Angie Thomas ikhuluma ngokudubula okuzohlala njalo kuphawula impilo kaStarr, intokazi emnyama emnyama ehlala phakathi komjondolo wakhe kanye nesikole samabanga aphezulu endaweni yabamhlophe. Enye yezincwadi eziphumelele kakhulu onyakeni ngakolunye uhlangothi lwe-Atlantic futhi okumele kufundwe kulezi zikhathi ezinzima
UMnyango Wenjabulo Ephakeme, ka-Arundhati Roy
Iminyaka engamashumi amabili ngemuva kukaNkulunkulu Wezinto Ezincane, Incwadi eyamenza waziwa umhlaba wonke, eyathengisa izigidi zamakhophi yawina ne-Booker Prize ngo-1997, u-Indian Arundhati Roy wayebuya kulo nyaka nendaba entsha. Inkonzo yenjabulo enkulu ikhuluma ngawo wonke umuntu, konke; umdwebo wabalingiswa okuvelele phakathi kwawo u-Anyum, owayekade ebizwa nge-Aftab, oyilungu lalowo obhekwa "njengowesithathu wesilisa" osungulwe emathuneni kanye nabanye abalingiswa abachaza leloya lizwe eliyimfihlakalo nelingalingani elichazwe ngaphandle kokulingana ababalisi bezindaba base-Asia isikhathi sethu.
UBerta Isla, kaJavier Marías
Noma yiluphi usuku olunikeziwe, usuku "oluyisiphukuphuku", luzolungisa konke ukuphila kwakho. Lesi yisisekelo sencwadi yokugcina nenamandla ye- umbhali weNhliziyo emhlophe qwa. Inoveli ekhuluma ngendaba yothando kaBerta Isla noTomás Nevinson inqamulelwe lapho uMqhele ubuka uTomás, indoda enesiphiwo sokukhuluma, efakaza ngokuziphendukela kwemvelo okushintsha unomphela ubuhlobo bakhe nonkosikazi wakhe.
Yiziphi izincwadi ezihamba phambili zango-2017 kuwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izincwadi ezihamba phambili zango-2017 ongeke ukwazi ukuyeka ukuzifunda
RODRIGO SEVILLA COBO kusho
Iziguli zikaDkt Garcia, incwadi enhle ka-Almudena Grandes, kodwa yakhe idlulela ngokweqile kwezingxenye ezimbili kwezintathu zencwadi futhi ilahlekelwe inzalo kancane. Halala umbhali.
Phendula kuRODRIGO SEVILLA COBO